Noma yimuphi umlimi wezinyosi olwa beekeeper uyazi ukuthi umbuso wokuphuza ophuthumayo futhi ovamile udlala indima ebalulekile ekulondolozeni imetabolism efanele kanye nobukhona obuvamile bezinyosi . Isiphuzo sezinyosi siyisimo esinjalo lapho kuhlale khona khona ukuthola amanzi afudumele futhi ahlanzekile, ngakho-ke kudingekile ukuba kube khona ukuphila kwalaba bantu abangenakusiza - abakhiqizi beju.
Abaqalayo bezinyosi bezinyosi abasazi amakhemikhali abazi, futhi ngezinye izikhathi, mhlawumbe, abafuni ukuzibophezela ngezindleko ezengeziwe zokuthengwa nokwakhiwa kwalaba baphuzi. Etholakale eduze nezindawo zemvelo zasendlini yezinyosi, babheka isimo esanele sokwanelisa izidingo ezibalulekile zokuphuza izinyosi. Kuqaphele ukuthi ngezinye izikhathi imifino ekufuneni kwamanzi ingahamba ngisho namade amade. Kodwa esikhathini esizayo, ngenxa yalokhu, kuyoba khona okungalungile okungeke kwenzeke ukuthi izinkolo zezinyosi zigcinwe ebuqothweni babo: kusukela ekusetshenzisweni okwengeziwe kwamandla ukuze izindiza zigcwalise umzimba ngamanzi, kungenzeka ukuthi izinyosi ziphakame, okuyinto, ngokufanele, ezobangela ukulahlekelwa emkhakheni wezinyosi.
Futhi ngisho nesiphuzo sezinyosi, ekugcineni sakhiwe ngemva kokufunda izincwadi eziwusizo futhi ulalele amathiphu alabo abanolwazi lwezinyosi, akunakwenzeka ukukusiza ekuqaleni. Izinyosi ezahamba phambili emgodini wokunisela ngomzila ofanayo ngeke zikwazi ukujwayela indawo entsha. Ngokusho kokuhlangenwe nakho kochwepheshe, ngezinye izikhathi lokhu cishe akunakwenzeka ukukwenza, bese abafuyi bezinyosi, futhi, mhlawumbe bazohluleka.
Ucela ukuthi ufundise kanjani izinyosi kumanzi? Nazi ezinye izincomo okudingeka uzilalele.
Okokuqala, kubalulekile ukuqala ukuthenga noma ukwakha isiphuzo ngaphambi kokuqala kwezinsuku ezifudumele, ukuze izinyosi, lapho kufika umsebenzi omusha wonyaka, ngokushesha zithole le misha.
Okwesibili, kungcono ukubeka abaphuzi bezinyosi ohlangothini olusenyakatho, ukuze amanzi ashuthukiswe ngokwanele, hhayi emgwaqeni onesiqondiso esikhulu sezindiza zezinyosi.
Okwesithathu, ukuze kufinyeleleke imiphumela ephumelelayo ngokushesha, i-honeycomb kufanele isakazekeze nxazonke zedivayisi, futhi amanzi ngokwawo kufanele aphuze kancane.
Ngokuqokwa, lezi zinhlobo ezilandelayo zeziphuzo zihlukaniswa: ukusetshenziswa jikelele kanye nomuntu ngamunye. Ngokukhiqizwa kwabo, izinto ezifana nezinkuni, zensimbi, ingilazi, kanye ne-plastic evamile kanye nama-plastiki asetshenziswa. Ezitolo ezikhethekile ungakwazi ukuthenga abaphuzi abangezibi kakhulu abaklanywayo ngenhloso yokuthakazelisa. Umphuzi we-ceramic wezinyosi ufanelwe ukunakwa kwabathengi. Amanzi avela emthonjeni lapha awela emgodini, esenziwe ngendlela ye-cone. I-groove yenziwa ngendlela yokuvunguza, lapho igeleza khona.
Kodwa ake sizame ukuhlangana nomuntu ophuzayo kuphela, ikakhulukazi njengoba zonke izindlela ezilungisiwe ezidingekayo ekudalweni kwayo ngokwezwi nezwi "zilele" ngaphansi kwezinyawo zethu. Isitsha sokuphuza okwenzelwe izinyosi ngezandla zakho yizindiza zomcabango wakho, futhi ngaphandle kokulondoloza okukhulu kwesabelomali sakho. Ngakho-ke, siyaqhubeka. Okokuqala, udinga ukunquma: isiphuzo sezinyosi, kuyoba yini?
Lapha, isibonelo, kukhona idivaysi enjalo elula eyenziwe ngensimbi yensimbi engenasici ne-crane. Kwanele ukuvumelanisa nayo ibhodi elithambekeleyo, lapho izimpungushe ezincane zidliwa khona, futhi uthele amanzi phezu kwazo. Amaconsi ayo asakazayo azoheha izinyosi eziningana zezinyosi.
Nasi esinye isibonelo esicacile sokwakha isitsha sokuphuza esilula futhi esiphuthumayo. Thela amanzi egumbini elivamile lesilazi. Sifaka isembozo, lapho sikhonsa izimbobo ezimbalwa bese siphenduka, ngenkathi sibeka phezu kwephalethi. Izimbiza ze-Glass ziyoshisa emisebeni yelanga, amanzi azohlala efudumele, okubalulekile izinyosi. Inzuzo yalowo isiphuzo phambi kwabanye ukuthi lokhu ukwakhiwa akudingi izindleko zezimali. Kungenziwa kufakwe kalula eduze komculi ngamunye, kepha, kuyadingeka ukuthululela amanzi ngesikhathi futhi uphilise igciwane lesitsha.
I-Valveless isitsha sezinyosi ezikude
Kodwa kuthiwani uma i-apiary ikude nendlu yakho, futhi awunayo ikhono lokuyibuka njalo? Kule nkinga, inkinga yokutholakala kwamanzi njalo izokusiza ukuba udale isiphuzo seziphuzo. Umqondo yilokhu.
Amanzi athululelwa kwisitsha esikhulu esinombukiso ohlanganiswe kuwo. Amapayipi wamanzi, ahlelwe eceleni kwemihlathi, kufanele ahlangane nawo. Ekugcineni kombhobho ngamunye, i-tube encane eyengeziwe ene-screw cap isolwe. Ukuze kungabikho ama-bubbles emoyeni okwenziwa ohlelweni uma igcwele amanzi, kubalulekile ukulandelela ubukhulu bokuvala kwabo. Ngakho-ke, amanzi angeniswa endlini ngayinye yezinyosi, noma ngabe ibekwe ezindaweni eziphakeme.
Thola ukuthi yini engcono kakhulu
Indlela yokwenza isiphuzo sezinyosi, manje uyazi. Yebo, kungenzeka ukuthi akuyona inketho yokuthenga nhlobo. Nakuba kubonakala sengathi kulula ukuza esitolo, ukhokhe futhi uthathe ukuthenga. Kodwa cha, ngeke sibheke izindlela ezilula futhi sisebenzise imali ezintweni ezingenziwa kalula ngezandla zethu.
Vumela isiphuzo sakho sokuzenzela izinyosi kungabi kuhle kakhulu esitolo, kodwa, njengoba sazi, kunoma yiluphi udaba umphumela ubalulekile. Ngokuthola ulwazi lokunakekela izinyosi ezihlakaniphile nokusebenza ngokuzikhandla, uzothola uhlobo lomklamo olungele indawo yakho yezinyosi futhi, ngokuhlakanipha, udale isitsha sokuphuza esingavamile nakakhulu.
Ngingaba ukuthumela ukuphuza utshwala? Imithetho Orthodox yokuHlawula